သင်တောကြီးများပျောက်ကွယ်လာမှုကြောင့် ချင်းတွင်းအထက်ပိုင်း သင်ဖြူးဖျာလုပ်ငန်းများပျောက်က? - Yangon Media Group
သင်တောကြီးများပျောက်ကွယ်လာမှုကြောင့် ချင်းတွင်းအထက်ပိုင်း သင်ဖြူးဖျာလုပ်ငန်းများပျောက်က?
ဟုမ္မလင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ – စစ် ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်းတွင်း မြစ်အထက်ပိုင်း ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ ဥရုချောင်းရိုးတစ်လျှောက်ရှိ တော တောင်များအတွင်း ပေါက်ရောက် သည့်သင်ဖြူးဖျာရက်လုပ်ရသည့် ကုန်ကြမ်းဖြစ်သည့် သင်ပင်၊ သင် တောကြီးများ ပျောက်ကွယ်လာသည့် အတွက် ဒေသရိုးရာသင်ဖြူးရက် လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများ ပျောက် ကွယ်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဟုမ္မလင်း မြို့နယ် နှောကူးတို့ရွာမှဒေသခံ ဦးအောင်မျိုးက ပြောသည်။
ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်း တွင် ယခင်အနှစ်သုံးဆယ်ဝန်းကျင် က ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်ခွန်သာ၊ သ ရက်ကိုင်း၊ တောင်ကြား၊ ဘုတ်စု၊ နှောကူးတို့၊ သူဌေးကုန်း စသည့် ကျေးရွာများမှာ သင်ပင်ခုတ်ရောင်း ချခြင်း၊ သင်ဖြူးဖျာရက်လုပ်ရောင်း ချခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို ရွာလုံးကျွတ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ယခုအ ခါ သင်ပင်ပေါက်ရောက်သည့် သင်တောများပျက်စီးပျောက် ကွယ်သွားပြီး သင်ဖြူးဖျာရက်လုပ် သူများလည်းကျောက်၊ ရွှေရှာဖွေ ရေးလုပ်ငန်းများတွင် သွားရောက် လုပ်ကိုင်မှုများပြားလာကြောင်း သိရသည်။
”ကျွန်မက ဟုမ္မလင်းနယ်သ ရက်ကိုင်းကျေးရွာကပါ။ ဟိုအရင် တုန်းက ကျွန်မတို့ရွာတစ်ရွာလုံး သင်ဖြူးဖျာရက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်း၊ သင်ခုတ်ပြီးမုံရွာ၊ မန္တလေးတင်ပို့ ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ် ကိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အခု တော့သင်တောကြီးတွေလည်း ရွှေမျောလုပ်ကိုင်သူတွေကြောင့် ပျောက်ကွယ်သွားပြီး၊ ဖျာရက်လုပ် ရောင်းချသူလည်းအနည်းအကျဉ်း လောက်ရှိတဲ့အတွက် မကြာမီကာ လအတွင်းမှာ သင်ဖြူးဖျာရက်လုပ် တဲ့လုပ်ငန်းပျောက်ကွယ်တော့မယ့် အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်” ဟု သ ရက်ကိုင်းကျေးရွာမှ ဒေသခံ ဒေါ် ပိုက်က ပြောသည်။
ဟုမ္မလင်းဒေသထွက် သင် ဖြူးဖျာနှစ်ယောက်အိပ်တစ်ချပ်ကို ကျပ် ၃ဝဝဝဝ အထိအရောင်းအ ဝယ်ဖြစ်နေပြီး၊ တစ်ယောက်အိပ် ခေါ်သုံးတောင့်ထွာရှိ သင်ဖြူးဖျာ တစ်ချပ်ကို ကျပ် ၂ဝဝဝဝ ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်ဖြူးဖျာရက်လုပ်ရောင်းချသည့် လုပ်ငန်း၊ သင်ခုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် သည့် ကျေးရွာပေါင်း ၁ဝ ရွာဝန်း ကျင်ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ သဘာဝသစ်တော များပျက်စီး ပျောက်ကွယ်မှုများလာသည့်အ တွက် သင်ဖြူးဖျာရက်လုပ်ရောင်း ချသူ လေး ငါးဦးဝန်းကျင်သာရှိ တော့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့သနပ်ခါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာများ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆွစ်ဇာလန်အခြေစိုက် အဖွဲ့နှင့် MoU ရေးထိုး
ဆင်ဆာဖြတ်ခံခဲ့ရသော ဇာတ်ဝင်ခန်းများကိုပါ ထည့်သွင်းထားသော 'မီ' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို စင်ကာ??
မန္တလေးဈေးချို ရှိ ခွင့်မပြု ဓာတုဆိုးဆေး ကင်းစင်သော ဈေးဆိုင်များကို အသိအမှတ်ပြု ကတ်ပြား ၁?